Musharaxiinta Abaalmarinta The Best oo Lasoo Saaray,Cayartoyda Raga Iyo Hawenka Ugu Fican,Goolhayaha ,Macalinka,Iyo Goolka Ugu Quruxda Badna - Bandhiga Media
Musharaxiinta Abaalmarinta The Best oo Lasoo Saaray,Cayartoyda Raga Iyo Hawenka Ugu Fican,Goolhayaha ,Macalinka,Iyo Goolka Ugu Quruxda Badna
Hussein Banjaani September 2, 2019
Xiddiga kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa loo magacaabay inuu isagu u tartamayo abaalmarinta Best FIFA Football Awards iyada oo ay wehelinayaan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, sidoo kale daafaca xulka England iyo kooxda Lyon ee Lucy Bronze.
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola, kan Liverpool Jurgen Klopp iyo kan Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa ah seddexda musharax ee u tagan abaalmarinta tababaraha ugu fiican.
Tababaraha kooxda Lionesses ee hablaha Enland Phil Neville ayaa ku tartamaya abaalmarinta macalinka haweenka.
Ku guuleystayaasha abaalmarinada waxaa looga dhawaaqi doonaa xaflad ka dhaceysa magaalada Milan 23ka Sebtember.
Daafaca dhexe ee Liverpool Van Dijk ayaa durbaba hantay abaalmarinta ciyaaryahanka sannadka ee Uefa Men, isagoo noqday daafacii ugu horeeyay ee sidaas sameeya.
Wuxuu ku guleysan kara abaalmarinta FIFA Men ka dib markii uu kooxdiisa ka caawiyay inay ku guuleysato Champions League bishii June, xidiga reer Holland ayaa loo doortay abaalmarinta PFA Player of the Year iyadoo Reds ay ku dhameysatay kaalinta labaad ee Premier League.
Xilli ciyaareedkii hore, waxa uu ciyaaray kulan kasta oo Premier League ah iyadoo Liverpool laga dhaliyay kaliya 22 gool – waana tirada ugu yar lixdii horyaal ee ugu waa weyn Yurub.
Van Dijk ayaa aya wajahaya Ronaldo, kaasoo dhaliyay 28 gool xilli ciyaareedkii hore isla markaana ka caawiyay Juventus inay ku guuleysato Serie A iyo Nations League oo uu la qaaday Portugal, iyo sidoo kale Leo Messi oo ka tirsan Barcelona.
Weeraryahanka reer Argentine ayaa dhaliyay 51 gool tartamada oo dhan si uu ugu guuleysto Kabta Dahabka ah ee Champions League iyo La Liga, waxaana uu ku guuleystay horyaalnimada Spain.
Difaaca midig ee Lyon Bronze ayaa loo magacaabay Uefa Player of the Year qeybta haweenka.
Waxay qaadatay Silver Ball Koobkii Adduunka ee France ee loogu talagalay ciyaariyahanka labaad ee ugu wanaagsan tartankan waxayna ka caawisay Lyon inay ku guuleysato horyaalnimada iyo Champions League laba jeer.
Bronze ayaa wajaheysa tartanka gabadha Megan Rapinoe, oo USA ku hogaamisay rikoorkeedii afaraad ee Koobka Adduunka bishii July, waxay ku guuleysatay Kabta Dahabka, Kubadda Dahabka iyado dhalisday goolki furitanka finalki World Cup waxana loo magacaabay abaalmarinta Fifa player of the match in Lyon.
waxa kalo tartameysa gabadha America Alex Morgan oo sidoo kale dhalisay lix gool isla markaana sedex caawin ka sameeyay tartankii ka dhacay France waxay hanatay abal marinta Silver Boot.
Guardiola ayaa ku hogaamiyay Manchester City Horyaalka Premier League, FA Cup iyo Carabao Cup xilli ciyaareedkii hore, isagoo noqday tababarihii ugu horreeyay ee koox u horseeda sedex koob oo gudaha Ingiriiska ah.
Wuxuu ku dhammeystay booska labaad horyaalka kooxda Klopp ee Liverpool hal dhibic ayay u wayen horyaalka, laakiin kooxda Anfield ayaa urursatay koobkeedii 6aad ee Yurub markii ay ku guuleysteen bishii June.
Pochettino, oo ah maamulaha kooxdii lagu garaacay finalka Champions League ee Tottenham, waa magaca seddexaad ee u tagan abalmarinta macalinka ragga ugu fican.
Dhanka kale, Neville, oo haweenkii England u horseeday semi-finalka Koobka Adduunka, ayaa wajahaya macalimada ku guuleystay Koobka Adduunka ee Mareykanka Jill Ellis iyo Sarina Wiegman, oo ah macallinka horyaalnimada Yurub oo sido kale gartay finalka Koobka Adduunka ee xulka Netherlands.
HALKAN HOOSE KA AQRISO SHAQSIYAADKA KU SO BAXAY LIISKA FIFA
Ciyaartoyda ugu wanagsa ragga:
Cristiano Ronaldo (Juventus / Portugal), Lionel Messi (Barcelona / Argentina), Virgil van Dijk (Liverpool / Netherlands)
Ciyaartoyda ugu wanagsan dumarka:
Lucy Bronze (Lyon / England), Alex Morgan (Orlando Pride / USA), Megan Rapinoe (Reign FC / USA)
Tababaraha ugu wanagsan ragga:
Tababaraha ugu wanagsan haweenka:
Goolhayaha ugu wanagsan haweenka:
Christiane Endler (Paris St-Germain / Chile), Hedvig Lindahl (Wolfsburg / Sweden), Sari van Veenendaal (Atletico Madrid / Netherlands)
Goolhayaha ugu wanagsan ragga:
Alisson (Liverpool / Brazil), Ederson (Manchester City / Brazil), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona / Germany)
Abaalmarinta Puskas (goolka ugu wanaagsan):
Ciimada Itoobiya ee katirsan howlgalka AMISOM oo isaga baxay gobalka Hiiraan+Sawirro